नेपाल बार एसोसिएसन Archives - Lokpati.com
Tag - नेपाल बार एसोसिएसन
अधिवक्ता ढकालको पक्राउप्रति नेपाल बारको आपत्ति
काठमाडौं, ३० वैशाख। विप्लव माओवादी निकट अखिलक्रान्तिकारीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चिरञ्जीवी ढकाल पक्राउ परेका छन्। अधिवक्ता ढकाललाई प्रहरीले विद्यार्थीसंगठनहरूले आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनबाटै पक्राउ गरेको हो।
नेपाल बारमा प्रगतिशीलका श्रेष्ठ विजयी
काठमाडौं, २१ चैत । कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मत गणना सकिएको छ । मत गणना सकिएसँगै प्रगतिशील समूहका चण्डेश्वर श्रेष्ठको विजय सुनिश्चित भएको छ ।
बारमा प्रगतिशील समूहको झिनो आशा
काठमाडौं, २१ चैत । नेपाल बार एसाेसिएसनको नयाँ नेतृत्वको लागि नेकपा समर्थित प्रगतिशील पेशागत समूहले झिनो मतले मात्र अग्रता लिइरहेको छ।
नेतृत्वका लागि प्रगतिशील पेशागत समूह र कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक प्यानलबीच कडा...
बारमा प्रगतिशील समूह जीत नजिक, कसको मत कति ?
काठमाडौं, २१ चैत । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको मतगणनामा प्रगतिशील समूहको अग्रता देखिएको छ ।
पछिल्लो मत गणना अनुसार प्रगतिशील पक्षका अध्यक्षका उम्मेदवार चन्डेश्वर श्रेष्ठले ८० मतले अग्रता लिएका छन् ।...
बारमा प्रजातान्त्रिककाे अग्रता, मार्ला त बाजी ?
काठमाडौं, २० चैत । नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक समूहले अग्रता लिएको छ । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बारको उपत्यका बाहिरको मत गणना सकिँदा प्रजातान्त्रिक समूह अगाडि रहेको छ...
बारमा लोकतान्त्रिक समूहकै अग्रता, कसको मत कति ?
काठमाडौं, २० चैत । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशिल समूहबीच तीब्र प्रतिस्प्रधा भइरहेको छ ।
निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सुनिल पोखरेलबीच तीव्र...
नेपाल बारमा लोकतान्त्रिक समूहकाे अग्रता
काठमाडौं, २० चैत । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशिल समूहबीच तीब्र प्रतिस्प्रधा भएको छ ।
निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सुनिल पोखरेलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा...
नेपाल बारमा प्रगतिशील समूहको अग्रता थप बढ्दै
काठमाडौं, १९ चैत । कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ। मतगणनामा प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहले अग्रता बढाउँदै लगेको छ ।
७ ठाउँको मतगणना सकिँदा...
नेपाल बारमा प्रगतिशील समूहको अग्रता
काठमाडौं, १९ चैत । कानून व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनमा प्रगतिशील समुहका अध्यक्षको अग्रता देखिएको छ ।
बारको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मतगणनामा प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहका अध्यक्षका...
नेपाल बारको मतगणना सुरु
काठमाडौं, १८ चैत । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गरिएको मतदानको मतगणना सुरु भएको छ ।
शनिबार भएको मतदातको मतगणना सोमबार अपरान्हबाट सुरु भएको हो । महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्र थापाले...
गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षकाे जनसांस्कृतिक महासंघकाे भेला
प्रधानमन्त्री कप : आज दुई खेल हुँदै
नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज : ओलीमाथि थप कारबाही गर्ने तयारी
उत्तर कोरियाको ‘सैन्य शक्ति’ प्रदर्शन